Zidane Oo kahadlay Mustaqbalka Isco | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Zidane Oo kahadlay Mustaqbalka Isco
Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qashinka ku daray wararka xanta ah ee sheegaya inay Los Blancos iibin doonto Isco, Zidane ayaana been-abuur ku tilmaamay wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya inuu baxayo xiddiga qadka dhexe ee reer Spain.
Kooxo badan oo ka ciyaara horyaalka England Premier League ayaa doonaya Isco waxaana ka mid ah Chelsea, Liverpool, Arsenal iyo Manchester City – waxayna haatan si dhow ula socdaan xaaladda xiddigaan ee kooxda Real Madrid.
Isco ayaa si xun u falceliyey ka dib markii uu tababare Zidane bedel ku sameeyey intii lagu jiray kulankii ay Real Madrid guuldarrada kala kulantay kooxda Leganes bishii lasoo dhaafay, taasoo cusbo kusii dartay wararka xanta ah ee sheegaya inuu Isco ka tegi doono Real Madrid.
Wararka soo baxayey Isbuucii lasoo dhaafay ayaana sheegayey inuu Zidane dareemay in uusan Isco soo bandhigi karin qaab ciyaareedkiisii fasal ciyaareedkii tegay oo kale, taasoo keeni karta inuu soo dhoweeyo aragtida ah in la iibiyo 25 sanno jirkaan.
Laakiin ka hor kulanka Sabtida ee kooxda Real Sociedad, tababaraha Real Madrid Zidane ayaa wuxuu caddeeyey inuu Isco weli mustaqbal wanaagsan ku leeyahay kooxda ka dhisan Santiago Bernabeu Stadium.
Zidane wuxuu yiri: “Waxaan doonayaa inuu Isco mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhan ku qarash gareeyo halkaan. Aragtideyduna ma ahan mid isbedeli doonta.
“Waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, waana uu muujiyey sababta uu u yahay ciyaaryahan wanaagsan, wararka sheegaya inuu baxayo Isco waa kuwo been-abuur ah”.
Liverpool ayaa dhowaan kusoo biirtay loolanka xiddigaan laakiin Chelsea ayaa ah kooxda ugu cadcad saxiixiisa, haddii ay Los Blancos ku xujeyso inay heshiiska Eden Hazard ka qeyb dhigto laacibkaan.